Yiziphi izindlela ezinhle kakhulu zokwakha i-backlink ezinamandla kuwebhusayithi yami?
Isu elifanele sokwakha isixhumanisi esinendlela efanele yokuthola i-backlink enamandla kuzohlale ihlinzeka ngemali engcono emgwaqweni wewebhu kanye nokuthuthukiswa kwesimo esilinganisweni ohlwini lwe-SERPs. Ngaphambi kokubheka uhlu lwamasu namasu okwenza kahle kakhulu okwamanje ukuze unikeze ngemuva kwe-backlink ezinamandla kuwebhusayithi yakho noma kubhulogi, ake ngiqale ngethuba lami lomuntu siqu. Ngincoma ukubheka izindlela ezimbalwa zokugwema uma usebenzisa isu elifanele sokwakha i-SEO.
Ngemva kwakho konke, kunezindlela eziningi ezinhle zokwakhiwa kwangemuva kwamandla angemuva. Ngesikhathi esifanayo, kunezindlela eziningi ezingalungile ezingabangela kalula isijeziso esinzima se-Google, futhi ukubuyiswa kwewebhusayithi yakho ngokuvamile kuyinkqubo enzima kakhulu - prodigieuse nuit nuxe lip. Ngaphezu kwalokho, uma kuziwa ngokweqile, le nqubo ingase ibe yinto engaphenduki ngokuphelele kulo lonke. Ukuvimbela isimo esinjalo sezinto ezimbi, yilokhu okumele kugwenywe ngazo zonke izindleko:
ukuthenga nokuthengisa imisebenzi nge-backlinks;
ukusebenzisa noma yiziphi izinhlelo ezizenzekelayo zokwakha izixhumanisi;
ukuhwebelana okukhulu nezixhumanisi;
ekubhekaneni namanethiwekhi ahlangene;
ukudala ama-backlink angabalulekile nokubenza baphile;
ukwenza ukusetshenziswa kwamanani, kunokuba izixhumanisi eziphezulu;
uthatha isinyathelo sokuxhumanisa amapulazi noma i-backlink ekhiqiza ama-web-rings.
Yiqiniso, ukusebenzisa lezi ziqephu kungase kukunikeze ngokushesha ukuthuthukiswa kwesimo esifushane. Noma kunjalo, bonke bazobanjelwa futhi bahlawuliswe yi-Google, ngokushesha noma kamuva. Khumbula, amawebusayithi aphansi kanye nezizinda akuyona indlela yokuhamba nganoma yimaphi ama-backlink anamandla nenqubekela phambili ehlala njalo ngezinga eliphezulu. Yingakho ucabangela ukuthi iGoogle ihlala yenza konke okusemandleni ukuthola kuphela izixhumanisi zekhwalithi, ngizokukhombisa amasu ambalwa nemikhuba engayithola engcono kakhulu okwamanje. Ngandlela-thile, ngavivinya bonke ku-website yami yebhizinisi. Nansi indlela ongathola ngayo ama-backlink anamandla ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu ye-SEO:
1. Izixhumanisi zangaphakathi ngaphakathi kwiphrofayli ephelele ye-backlink yewebusayithi kaningi ayinakekelwa ngabantu abaningi kakhulu. Yiqiniso, izixhumanisi zangaphakathi empeleni zivela ekhasini elilodwa kuya kwelinye - kungena ngaphakathi kuwebhusayithi eyodwa. Kodwa-ke, phawula ukuthi uma kwenziwa kahle futhi efakwe igama elingukhiye lomsila omuhle, izixhumanisi zakho zangaphakathi zinganikeza izinzuzo ezilandelayo:
igunya lekhasi elingcono lewebhu lonke;
ukusatshalaliswa okulinganayo kwejusi lokuxhumanisa;
izinga lokunciphisa elingaphansi kwewebhu kuwebhusayithi yonke;
ukuthuthukiswa komgwaqo nokuchayeka kokuqukethwe kwekhasi lakho lakudala;
ukuxhumeka kwamasu kungabamba iqhaza kumazinga aphezulu egama elingukhiye.
2. Ukuqhathaniswa kwebhizinisi lendawo kuyithuba elihle lokuthola backlink ezinamandla kuwebhusayithi yakho ibhizinisi main. Qinisekisa ukuthi uthuthukise izikhundla zosesho zendawo bese uqinisa igunya lakho lewebhu ngesikhathi esifanayo. Konke okudingayo lapha ukugcina izakhiwo ezifanayo ze-NAP kuzo zonke izixhumanisi zakho zesikhombisi kuma-search amakhulu amakhulu njenge-Google, Yahoo, ne-Bing.
3. Ukuvuselela okuqukethwe kwakho kwekhasi elicacile into enamandla kakhulu, njenge-infographics, futhi kuyindlela enhle yokwakha i-backlink enamandla kakhulu kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi. Ngaphezu kwalokho, kuyoba uhlelo oluhle kakhulu lokudala nokuphucula ukuthuthukisa ukufinyelela kwakho komphakathi ngesikhathi esifanayo. Ngaphambi kokuba uqale ukuthola ama-backlink aphezulu, qiniseka ukuthi ama-infographic wakho ahlanzekile, alula futhi ahambisana nezilaleli zakho ngangokunokwenzeka. Futhi, zama ukulondoloza isivinini esisheshayo sokulayishwa ngobukhulu bawo obujwayelekile obufika kuma-pixel angu-2000. Namathisela ngaphezu kwemibala emithathu kanye nobukhulu bamafonti angu-2. Futhi ungakhohlwa ukwakha indaba evusa amadlingozi ezogcina isifiso somsebenzisi kuze kube sekupheleni. Uma ngabe i-infographics yakho engcono kakhulu iyenziwe, vele uhambise kumawebhusayithi wakamuva anikezelwe - sebenzisa imiyalo ethize ku-Google, njengokuthi "ngenisa i-infographic," "inurl / intitle: ngenise infographic," "allintext: ngenise infographic," njll.